सुध्रिन नसकेका दंगीशरणका सामुदायीक विद्यालय – News Portal
December 11, 2019 epradeshLeaveaComment on सुध्रिन नसकेका दंगीशरणका सामुदायीक विद्यालय
दंगीशरण, २५ मंसिर । दंगीशरण गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय फेरी बिग्रदै गरेको अवस्थामा भेटिएको छ । मंगलबार अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटिएको हो । सामुदायीक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्नखाले कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।
गत बर्षको अनुगमनका क्रममा विद्यालय धेरै सुधार भेटिए पनि पछिल्लो समयमा बिग्रिदै गरेको अवस्थामा फेला परेको हो । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा अनुगमन टोली र दंगीशरण गाउँपालिका शिक्षा शाखाले मंगलबार दुईवटा सामुदायीक विद्यालयको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या एकदमै न्यून र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो ।
सरस्वती आधारभूत विद्यालय पदमपुरमा विद्यार्थी भर्ना सन्तोषजनक रहेपनि विद्यार्थीहरू एकदमै कम उपस्थिति रहेको थियो । विद्यालयमा अभिभावकहरूको उपस्थिति बढेकाले बालबालिकाको सिकाइ प्रभावकारी हुने देखियो ।
यस्तै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अनुदानअन्तर्गत कक्षा छापामय वातावरणको अवस्था शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा पुरक पढाइ सामग्रीको प्रयोग एजिआर प्रवद्र्धन गर्न विद्यालय तथा समुदायमा गरिएका अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था मध्यम रहेको पाइएको थियो भने विद्यार्थी संख्या एकदमै न्यून रहेको पाईएको थियो ।
विद्यालयमा जम्मा २ सय १५ जना विद्यार्थी रहेकोमा अनुगमनका क्रममा ७४ जना मात्र विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै भानु मावि प्रसडुवामा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति राम्रो देखिएको थियो भने पढाइ मेला, कक्षाकोठाको ब्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ सामग्री ब्यवस्थित रहेको पाइएको थियो ।
यस्तै शिक्षकहरूको हाजिरी हेर्दा उपस्थिति कम रहेको पाइएको थियो । उक्त अवसरमा शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारीले शिक्षकहरूको लापरवाहीले विद्यालयको अवस्था सुधारोन्मुख हुन नसकेको बताए ।
विद्यालयको अवस्था बिग्रनु शिक्षकहरूको हात रहेको भन्दै बेलैमा सुधारोन्मुखतिर लाग्न आग्रह गरे । सामुदायीक विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न गाउँपालिका लागिपरेको भन्दै शिक्षकहरू गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले भने– ‘सामुदायीक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार भईसकेको छ अब शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि शिक्षकहरू लाग्नुस् ।’
अनुगमनमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमका संयोजक दिपलाल चौधरी, सामुदायीक परिचालक पारस चौधरी, दंगीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्का, शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारी, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर चौधरी, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष टंक वलीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।